Usoro ntinye ederede Email nke na-akpali nzacha Spam | Martech Zone
Okwu Isiokwu Email Nke na-akpali nzacha Spam
Zọ kachasị mfe iji nweta ozi ịntanetị gị bụ ụzọ dị na folda SPAM bụ okwu ejiri na usoro isiokwu gị. SpamAssassin bụ ngwa na-egbochi spam na-egbochi ya nke na-ebipụta iwu ha maka ịmata SPAM na Wiki ha.
Ndị a bụ iwu SpamAssassin jiri okwu na usoro isiokwu:
Isi okwu a bu oghere (Daalụ Alan!)
Isiokwu ahụ nwere okwu njikere, nzaghachi, enyemaka, nkwanye, azịza, ịdọ aka na ntị, nkwupụta, ekele, okwu, akwụmụgwọ, ụgwọ, ụgwọ, ụgwọ, ọrụ ma ọ bụ mmeghachi omume… ma ọ bụ mmezigharị okwu ndị ahụ.
Isi okwu a nwere ọnwa edebiri (ihe atụ: Mee)
Usoro okwu nwere okwu cialis, levitra, soma, valium ma ọ bụ xanax.
Isi okwu malitere na "Re: new"
Isi okwu a nwere “ibu”
Isi okwu a nwere "ihu ọma gị" ma ọ bụ "a nwapụtara"
Isi okwu a nwere "n'efu"
Isi okwu a nwere “nchekwa”
Isiokwu isiokwu nwere “ọnụ ala”
Isi okwu nwere “ọnụego dị ala”
Isi okwu a nwere okwu "dị ka a hụrụ".
Isi okwu a malitere site na akara dollar ($) ma ọ bụ spammy na-eleba anya na ego.
Isi okwu a nwere okwu "ụgwọ gị".
Isi okwu a nwere okwu "ezinụlọ gị".
Isi okwu a nwere okwu ahụ "enweghị ọgwụ" ma ọ bụ "ọgwụ na ntanetị".
Isi okwu malitere na ida, “Ọnwụ ọnwụ”, ma ọ bụ na-ekwu maka ifelata ma ọ bụ pound.
Isi okwu na-amalite site na ịzụta ma ọ bụ ịzụta.
Isiokwu ahụ kwuru ihe ọjọọ banyere ndị nọ n’afọ iri na ụma.
Isi okwu malitere site "you rọrọ nrọ", "have nwere", "want chọrọ", "you hụrụ n'anya", wdg.
Isi okwu a bu isi niile.
Usoro isiokwu nwere akụkụ mbụ nke adreesị ozi-e (dịka ọmụmaatụ: isiokwu nwere "Dave" na adreesị ozi-e na-ezigara ya Dave@ domain.com).
Isiokwu ahụ nwere ọdịnaya metụtara mmekọahụ.
Isi okwu a na-anwa ikweta ma obu mebie okwu. (ịmaatụ: c1alis, x @ nax)
Usoro isiokwu ahụ nwere koodu UCE Bekee ma ọ bụ Japanese.
Usoro isiokwu nwere akara email a na-achọghị na Korea.
Na mmemme ị maghị ebe okwu SPAM sitere, lee ị na-aga:
Tags: kpaliri omume kacha mmaspam nzachaspam iyo Keywordsokwu nzacha spamokwu spamspamassassinusoro kachasị mmaisiokwu